Raharaham-pirenena : Sorona hatrany ny Foloalindahy -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaham-pirenena : Sorona hatrany ny Foloalindahy
Raharaham-pirenena : Sorona hatrany ny Foloalindahy
Amin’ny faha-7 Novambra ho avy izao araka ny daty navoakan’ny governemanta no daty hanatanterahana ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, taorian’ny fanapahan-kevitra navoakan’ny HCC ny amin’ny tokony hisian’ny fifidianana mialohan’ny fotoana voalazan’ny Lalàm-panorenana. Tsara araka izany ny manao jery todika ny tamin’ny fomba niakaran’ireo izay efa teo amin’ny fitondrana ahafahana misintona lesona ny amin’ny ho avy.
Fifandonana sy rà mandriaka no niakaran’ireo filoha teo aloha teo amin’ny fitondrana ary nifanafika sy nifamono hatrany koa ny Foloalindahy. Nizaka ny mafy tokoa ny Tafika malagasy sy ny fianakaviamben’ny miaramila isaka ny miady fahefana sy seza ny mpanao politika. Maro ireo manamboninahitra namoy ny ainy, notifirina sy maty tany am-ponja ny taona 2002, toa ny jeneraly Raymond Andrianaivo (maty notifirina teo am-pandriana tao amin’ny Hopitaliben’i Fianarantsoa, ny jeneraly Boba sy ny lietna Norbert Botomora (maty tao am-ponjan’Antanimora) kapiteny Andrianasolo Vola, ny « adjudant chef » Andriamanantena Jeanson. Miaramila telo ihany koa no namoy ny ainy nandritra ny fifandonana teny amin’ny FIGN ny faha-20 Marsa 2010, ary mbola nitohy izany fifandonana niteraka famoizan’aina izany ny alahady 22 jolay 2012 teny amin’ny RFI nandritra ny fitondrana HAT, miaramila telo koa no maty ka isan’izany ny kaporaly Koto Mainty sy ny kapiteny Pascal. Tsy ho voatanisa eto kosa ireo manamboninahitra, miaramila notanana am-ponja nanomboka ny taona 2002-2009.
MAPAR sy TIM
Nampamono sy nampifandrafy ny Foloalindahy ary niorina teo ambony rà mandriaka ny fomba niakaran’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina teo amin’ny fitondrana. Fiainam-pianakaviana maro teo anivon’ny fianakaviamben’ny Tafika malagasy no potika sy rava ary mbola maro ireo mizaka ny mangidy vokatr’izany hatramin’ny androany. Fitiavan-tseza sy fahefana teo amin’i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana daholo anefa no fototr’izany.
Tsy nisy vidiny sy lanjany teo amin’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina anefa ireo aina nafoy teo anivon’ny Foloalindahy, porofon’izany ny fiarahan’ny TIM sy ny MAPAR nikasa hanongana ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina, ary mbola nikasa hampiasa sy hampifandrafy indray koa ny Tafika hahatongavana amin’izany. Adinon’ny TIM sy ny MAPAR fa noho izy ireo no nahatonga ny fifamonoana teo amin’ny samy miaramila, nampitondra fahoriana ny vady aman-janaky ny tontolon’ny Tafika malagasy.
Mahavariana ihany anefa ny fihetsiky ny filohan’ny HAT, Andry Rajoelina, izay nampiseho fihetsika feno avonavona tanteraka manoloana ny fampihavanam-pirenena tarihin’ny FFKM. Tsy tokony hijanona fotsiny eo amin’ny fampihavanana anefa ny dingana ho an’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina, izay samy tompon’antoka feno tamin’ireny fifamonoana tao anivon’ny Foloalindahy ireny. Mila miaiky sy manonitra ny heloka vitany any amin’ireo fianakavian’ny maty, ireo vady aman-janak’ireo nigadra an-taonany maro, ireo rava fananana. Izany hoe, tokony handalo Fitsarana mialohan’ny hirosoana amin’ny Fampihavanana. Ho an’i Andry Rajoelina manokana moa dia ireny efa nasehony nandritra ny fetin’ny 26 Jona ireny ny tsy fanomezany hasina ny Foloalindahy malagasy, Foloalindahy izay nampidiriny tao anatin’ny fifandrafiana sy ny fifamonoana niarovany ny sezany nandritra ny fitondrana Tetezamita.
Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay dia nikaikaika ny vahoaka tamin’ny fiakaran’ny vidim-bary tampoka tsy fantatra hoe nahoana. Maina ny tany tao anatin’ny fotoana nisian’izany. Teo indrindra no nahatonga an’ireo mpamongady ho nanana sain-dratsy hampiakatra ny ...Tohiny
Fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato : Efa 60 isan-jaton’ny asa no vita